Komal Oli – Unmarried because of Shivaji’s Badmasi – Nepali Movies
Komal Oli – Unmarried because of Shivaji’s Badmasi
Komal Oli makes news every Teej. It is not only that she is unmarried, she also sings suggestive songs indicating she is eager to get married.
It is not that nobody likes her but, it is rather she hasn’t foundasingle person who fits in the cast of her dream-prince. She is beautiful, looks young (although she isn’t), and hasalot of fans eager to make her their bride.
Karun Aryal has talked with the singer about her marriage plans. But, she smartly avoided the question. She told that she hasn’t foundaperson with whom her wavelength fits. Read the interview in Nepali:
गोजीमा गाँठ भा’को मनमा आँट भा’को पुरुष फेला नपरेपछि गायिका कोमल वली अझैँ पोइल जान पाएकी छैनन् । बिहे गर्ने उमेर त उहिल्यै भइसकेको हो तर शिवजीले नै नजुराई दिएपछि के गर्ने । शिवजीको बदमासीका कारणले बिहे गर्न नपाएको बताउने कोमललाई प्रेम प्रस्ताव राख्नेको कुनै कमी छैन । तर खोजेको जस्तो उनले पाउन सकेकी छैनन् ।
त्यसैले पोइल नजानु भा’को हो ?
(हाँस्दै) खै ।
साउन लागेको छ, सोमबार शिवजीको व्रत बसे श्रीमान पाइन्थ्यो कि ?
बिहेसिहे नगरे नि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो बाले, पत्रकारले सोधी सोधी दिक्क पार्न थाले । आखिरमा बनायौँ निराश, धत्तेरिका शिवजी रै छौ बदमास । शिवजीको बदमासीकै कारणले बिहे हुन सकेन । यो मेरो नयाँ गीत पनि हो ।
उमेर त ढल्किसक्यो होइन र ?
जसरी सोच्यो त्यसरी नै हुन्छ । ढल्केको सोचे ढल्केको हुन्छ सुरुवात हो भनेर सोचे सुरुवात हुन्छ । यो व्यक्तिमा भरपर्छ ।
प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरु त निकै छन् रे ?
योङहरूले बढी राख्छन् । सबै उमेर समूहकाले मन त पराउँछन तर योङ र आफूभन्दा कान्छाले मन पराउने धेरै छन् । यस्तो देख्दा खुसी नै लाग्छ ।
कस्ता कस्ता प्रस्ताव आउँछन् नि ?
त्यही त हो नि । म तपाईंलाई मन पराउँछु भन्दै मेल, एसएमस र चिठी पठाउँछन् । अहिले पनि रेडियो नेपालमा हप्ताको दर्जन जति चिठी आउँछ । राम्रो खाम हेरेर मात्र चिठी पढ्छु । यसैगरी विदेश गएको बेला गिफ्ट दिने पनि प्रसस्त हुन्छन् ।
अहिलेसम्म कस्ता फ्यान फेला पार्नु भएको छ ?
सडकमा बालबालिकादेखि ८०/ ८५ उमेर पुगेकासम्मका फ्यान छन् । कोही अपरिपक्कताले त कोही क्रेजी भएर आउँछन् । एक जना फ्यान त अचानक मोटर अघि आएर ‘मलाई माया गर्दैनौ भने मारी देऊ’ पनि भन्न भ्याए ।
यस्ता फ्यान रहेछन्, मन पराउने पुरुष फेला नपरेकै हो त ?
फेला नपारेकै हो ।
पुरुषका कुन तीन गुण बढी मन पर्छ ?
आउटफिट राम्रो देखिनुपर्‍यो । पुरुष भएपछि वीरत्व हुनुपर्‍यो र वेभलेन्थ मिल्नुपर्‍यो ।
उमेर अनुसार जवान नै देखिनुहुन्छ नि ?
उमेर अनुसार त ठिकै देखिएको छु । मैले एक्सरसाइज र खानामा विशेष ध्यान दिने गरेकी छु ।
नायिका हुने रहर जागेन ?
मेरै जीवनकथामा चलचित्र बनाउने प्रस्ताव आएको छ । त्यसैमा अभिनय गर्ने सोच बनाएकी छु ।
Posted by maha at 1:25 am	Tagged with: Komal Oli, Singer
2 Responses to “Komal Oli – Unmarried because of Shivaji’s Badmasi”
खाम हेरेर राम्रो लागे मात्र चिट्ठी पढ्ने रे… कस्तो अचम्म ! भनेपछी स्पस्टै भयो नि, बाहिरी रूप हेरेरै खोजेको जस्तो छ पुरुष पनि, टन्न गाँठ भएको मान्छे नै खोजेको हुनु पर्छ ।
Hi, Komal oli ji
i want to meet with u face to face plz give me ur contact no so that i can call u waiting for ur reply
Shivani Singh Tharu’s choices – miniskirts doesn’t fit her Rekha Thapa wants to beamom soon